Ezopolitiko | May 2022
Ixesha elide uTrump u-Ally uRoger Stone wafunyanwa enetyala lokuxoka kwiCongress kunye nokungcolisa amangqina
UStone, umcebisi wexesha elide kuMongameli uDonald Trump, wabanjwa ngasekupheleni kukaJanuwari ngokuxoka kwiCongress malunga nonxibelelwano lwakhe neWikiLeaks.
UTrump waqukunjelwa waya kwisibhedlele saseWalter Reed ukuze ahlale iintsuku ezininzi emva kokufumana i-COVID-19
Umongameli uya kuhlala esibhedlele 'ngenxa yobuninzi bobulumko, nangokwengcebiso kagqirha wakhe kunye neengcali zonyango.'
Rush uLimbaugh's Last six Apologies
Umsasazi kanomathotholo ukhubekisa kaninzi, kodwa akaceli uxolo kakhulu. Kwaye xa esenza, njengoko wenzayo namhlanje - kubafazi, abantu base-Afrika-baseMelika, umntu ogulayo - akayibeki ngokuchanekileyo intliziyo yakhe kuyo. Kodwa uSandra Fluke, awambiza ngokuba 'lihule,' uphakathi kwabantu abalungileyo.
Ulawulo lukaTrump luphulukene nezigidi zeedola zoKutya kunye naManzi ezenzelwe iPuerto Rico emva kweNkanyamba uMaria
UTrump usanda kuzama ukubhala imbali yemizamo yokubuyisela e-US ePuerto Rico.
Ukhetho lukaJoe Biden kwiDeb Haaland kuNobhala wezangaphakathi yimbali
Ukuba iqinisekisiwe yiSenethi ukukhokela iSebe lezangaphakathi, iHaaland iya kongamela iBureau yeMicimbi yaseIndiya kunye nolawulo lomhlaba.
UHillary Clinton Uxoka uthi wayeseNew York nge-9/11
UClinton, owayeyiSenator ngelo xesha, wayekwikhaya lakhe eWashington, DC, ngexesha lohlaselo lwabanqolobi. Wabuyela eNew York ngosuku olulandelayo.
Iidemokhrasi zibonise iVidiyo eyothusayo yabalandeli bakaTrump besebenzisa amazwi akhe njengoko babehlasela iCapitol kwityala lakhe lokutshutshiswa.
I-House Democrats ivule ityala lesibini lembali likaTrump lokumangalela ngoLwesibini ngevidiyo echaza indlela amazwi alowo wayesakuba ngumongameli aqala ngayo ubundlobongela.
Esi siprayimari soBuntu seSenethi sibonakalisa ukuba iDemocratic Texas inokujongeka njani
Unyulo lwe-Senate oluqhubekileyo phakathi kukaMJ Hegar kunye noRoyce West lubonisa ukhetho phakathi kwezazisi ezimbini ezahlukeneyo malunga nokuba yintoni ikamva lezopolitiko zombuso, njengoko iiDemokhrasi zizuza.
Ukuwa kukaJohn Edward, njengoko kubaliswa nguMceli weSizwe
Owayesakuba ngumgqatswa ukhululwe kwityala elinye namhlanje, njengoko inkundla yamatyala ijinga kwamanye amatyala anxulumene nomcimbi ofihlakeleyo. Inye into ecacileyo: I-tabloid yevenkile enkulu iyifumene kakuhle.
KwiiNtlanganiso ze-UN ezivaliweyo, amagosa olawulo lukaTrump atyhala ukungazibandakanyi kwiiNkqubo zeMpilo yabasetyhini bamazwe ngamazwe.
Amalungu e-HHS, i-USAID, kunye neMishini yase-US kwi-UN acele ukuba kubhekiselwe kwizinto zokuthintela ukukhawula, ukuqhomfa, kunye nemfundo ebanzi yezesondo ukuba zicinywe kuxwebhu olumalunga nokulingana ngokwesini kumazwe ngamazwe, ebiza i-US 'njengelizwe elixhasa ubomi.'
Njani iNkongolo eneminyaka engama-92 ubudala yaba yiNkokeli eHluphekileyo ye-Resistance Twitter
Owayesakuba ngummeli uJohn Dingell, osebenze kwiCongress iminyaka ephantse ibe ngama-60, usweleke ngoLwesine. Wayeyazi kakuhle i-Twitter kwangethuba kwaye waqhubeka ekhonza iimemes kunye neziqhulo nakwintsuku zakhe zokugqibela.
INkundla ePhakamileyo iwuchithile umthetho ochasene nokuqhomfa eLouisiana kwityala layo lokuqala eliphambili lokuqhomfa phantsi kukaTrump.
INkundla ePhakamileyo iphakamise ilungelo lomgaqo-siseko lokukhupha isisu ngoMvulo, igatya iinzame zombuso zokunciphisa ukufikelela kwinkqubo okwesibini kwiminyaka emine.
UWright Adman: Uhlaselo olutsha aluyi kusebenza
Ngo-2008, uRick Wilson wenza isibhengezo, emva kwexesha ehlasela u-Obama ngeentshumayelo zikaYeremiya Wright. Uthi unqwenela ukuba ne-Twitter ngelo xesha - kodwa akakholelwa ukuba iintengiso ze-Wright ezicwangcisiweyo zinokusebenza ngo-2012.
Iqela lezomthetho likaTrump libuzwe malunga neNgqina elathi larhoxa kwiBali lalo lobuqhophololo lonyulo. Kwabe Kuthuleke Kaninzi.
Ingqina, umsebenzi we-USPS, kuthiwa usayine i-afidavithi yokuba amabango akhe obuqhophololo kunyulo ayengeyonyani.
Ngaba abantu baseSenate Republican basacinga ukuba uAnita Hill wayexoka? Abayi Kuthetha.
Isithunzi sowe-1991 sijonge phezulu kwiNdlu yeeNgwevu. Kwaye abahlalutyi abagcinayo abakayikholelwa i-Hill.
Abavoti abancinci abaMnyama eCarolinas bathi bayayithanda le nto ithethwa nguBernie Sanders malunga noBulungisa bobuhlanga
Nangona abazinikele ekuxhaseni uBernie, abavoti abancinci abamnyama abaza kumbona bacinga ukuba uSanders uphucule ukususela ngo-2016. 'Ungomnye wabambalwa abavulekele ukuzifundisa ngaloo nto.'
Nantsi into omawuyibukele ngoLwesibini njengoko amazwe amathandathu eVota kwiPrayimari yeDemokhrasi
KungoLwesibini oMkhulu ngoLwesibini kunye noBernie Sanders kunye noJoe Biden baya kukhuphisana nabathunywa abangama-352 njengoko iprayimari kamongameli ka-2020 iqala isigaba esitsha.
Abagwebi babethe phantsi ukuvalwa kwelizwe okune kokuqhomfa ngexesha lokuqhambuka kwe-coronavirus
Amaqela amalungelo okuzala agwebe amazwe amahlanu, kubandakanya iTexas, Alabama, Oklahoma, Iowa, Indiana, kunye neOhio, ngokuvalwa kokuqhomfa njengenxalenye yezicwangciso zabo zokunciphisa i-coronavirus.
Owasetyhini omncinci oPhambili wabetha enye yezona Democrat zinamandla kwiNkongolo
Ngomsindo owothusayo, u-Alexandria Ocasio-Cortez waphumelela uJoe Crowley, owayethathwa njengongena ezihlangwini zikaNancy Pelosi.
Inani eliyimbali labasetyhini ababaleka iOfisi ngoLwesibini kwaye sele besaphula iiRekhodi
ULuhlu luka-EMILY lukholelwa ukuba ukubandakanyeka okukhulu kwabasetyhini kulo nyaka kubonisa utshintsho lolwandle kwizopolitiko zase-US. Asiyofashoni, ifashoni, okanye unyaka.
Imifanekiso engaphantsi kwethayile engaphantsi
Iintsana zokuhombisa ngemibono
iingoma zoku jam